U-AK 47 akayiniki lutho iPirates koweNedbank Cup ezowudlala neDowns - Impempe
U-AK 47 akayiniki lutho iPirates koweNedbank Cup ezowudlala neDowns
USandile 'AK 47' Ndlovu owayengumgadli weMamelodi Sundowns
Owayengumgadli weMamelodi Sundowns, uSandile “AK 47” Ndlovu, ukhuza labo abacabanga ukuthi iqembu elizowina iNedbank Cup yilelo elizodla umhlanganiso phakathi kweMamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates.
Ngenxa yokubambeka emidlalweni yeConfederation of African Football (CAF), la maqembu azoze adlale umdlalo we-quarterfinal yeNedbank Cup ngo-Ephreli 15. Amaqembu asevele adlulele emidlalweni eyandulela eyamanqamu, yiChippa United ezobhakana nePretoria Callies, kanti iTshakhuma FC ilinde ozowina phakathi kwamaBrazilians neBucs.
UNdlovu oqeqesha iqembu lakhe eligijima kwiSAB League, iSANS FC, uthe kuyomele ozowina phakathi kweSundowns nePirates agawule abheke ngoba izinto zimane ukwenzeka kwiNedbank Cup, futhi lokho sekubonakale kaningi kumasizini edlule.
USandile “AK 47” Ndlovu esadlala ibhola wayelijabulela kanje igoli
Ukhuluma ngento ekhona uNdlovu ngoba iKaizer Chiefs ayikho kwiNedbank Cup nje yingoba ikhishwe yiRichards Bay FC edlala kwiGladAfrica Championship. Amakhosi aneshobolo impela ngoba nango-2019 ashaywe yiTS Galaxy (ebidlala kwiGladAfrica Championship) kowamanqamu weNedbank Cup kungalindele muntu.
“Abantu kumele baqonde into eyodwa ukuthi njengoba bengekho abalandeli kunzima kuwo wonke amaqembu. Namaqembu athathwa njengamancane akweyandulela eyamanqamu ngoba awanayo ingcindezi njengamanje,” kusho uNdlovu.
“Akumele bacabange ukuthi ozowina phakathi kweSundowns nePirates uzokhala emuke neNedbank Cup. Kumele ukuqonde ukuthi wonke amaqembu alambile. La maqembu athathwa njengamakhulu ayalikhuphula izinga ngendlela adlala ngayo kodwa kumele agawule abheke kulawa amancane. Kuzobe kungowamanqamu (kwiDowns neBucs) kodwa iNedbank iyamangazana. Uma elinye lala maqembu lingaya ngokuthi vele seliwinile lizothola okukhuluma ukumangala.”
Nokho uNdlovu ubona kuyiSundowns ezodlulela kowandulela owamanqamu njengoba eyibona ingcono kunePirates ngokudlala.
“Ngicabanga ukuthi yiSundowns ezowina ngoba inesipiliyoni sale midlalo. Indlela abadlala ngayo nokuhlangana kwabo, ngicabanga ukuthi yibona abazowina lo mdlalo. IPirates iyashesha kodwa iyahluleka ukuba nelinye iqhinga uma kubheda, kanti iSundowns iyakwazi ukukwenza lokho. Ngokwami nje iSundowns izowuwina umdlalo,” kuphetha uNdlovu.
Uma iSundowns igcina ngokuwina indebe kuzobe kungokwesibili amasizini elandelana njengoba nangesizini edlule kuyiyona ephakamise iNedbank Cup.
Previous Previous post: Kungase kuyishubele iPirates emidlalweni ezayo yeDStv Premiership
Next Next post: Uvuke ngeChiefs uLarsen obese kunesikhathi engasebenzi